Wakiilada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ku baaqay Dagaal ka dhan ah Alshabaab.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wakiilada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ku baaqay Dagaal ka...
Wakiilada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ku baaqay Dagaal ka dhan ah Alshabaab..
Wakiilada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa ku baaqay in lasii wado howlgalka ka dhan ah dagaalamayaasha Al-shabaab ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya oo ay wadaan Ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM.
Wakiil James Swan oo la hadlaayay Wargeyska Daily Xayaat ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa waxaa uu sheegay in Al-shabaab ay halis ku yihiin horumarka Soomaaliya, isla markaana ay muhiim tahay in lasii wado howlgalka ka dhanka ah, waa sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay in Al-shabaab ay weeraro iyo falal kale ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya, ayna weli awoodan inay sameeyaan weeraro abaabulan iyo kuwo loo adeegsado qaraxyo, taasina ay muujineyso inay weli leeyihiin awood Milateri.
“Waa mid waajib ay tahay in aan xuso in khatarta Al-Shabaab aysan kaliya ahay mid Milateri, Balse waa guud ahaan shaqada laga qabanayo Soomaaliya ee dhismaha hay’addaha dowladda, in dowladda ay wax ku ool noqoto, in ay u adeegto dadweynaha, in ay u cadaalad fasho iyo in ay sarre u qaado horumarka dalka” ayuu yiri James Swan.
Si kastaba Wakiilada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa ku soo aadaya, iyadoo xiligaan dalka uu aaday Doorashooyinka Baarlamaanka iyo tan Madaxtinimada dalka Soomaaliya oo la filayo inay dhacaan dhammaadka 2020/2021.
Previous articleCiidamada Nigeria oo beeniyay in ay dileen dibad baxyaal aan hubaysneen bishii October
Next articleDowlda Etoobiya oo Rag loo qabtay in ay ka tirsan yihiin Alshabaab iyo Daacish oo bandhigtay
Cumar (Cumar finish) oo xariga ka jaray Wadadan laamiga ah oo isku xirta Degmooyinka Xamar Jajab Xamar weyne iyo Shingaani.
Garoonka kooxda kubda cagta Roma oo laga helay bambaanooyin aan wali qarxin oo looga tagay xiligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida.
Askar Boliisk oo Duleydka Muqdisho Qarax lagu laayey
axmed cali - November 25, 2020 0
Ciidamo ka tirsan booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa lagu qarxiyey barqanimadii maanta duleedka Muqdisho. Gaari ay wateen ciidamadan ayaa la soo...
Wasiirka Dakadaha Galmudug oo Heshiis la gashay Shirkad Dhiseysa...
Yuusuf Jeego Magafa weyne ee Dadka ka Tahriibiyo Dalka Sudan oo...
Midoowga Musharaxiinta oo goordhow shir Xasaasi ah ku yeelan...
IRAN oo ku eedaysay Israel dilka saynisyahankii la khaarajiyey
Qaramada Midoobay oo ka digtay xiisadaha sii kordhaya ee bariga dhexe...